बैंकमा उभिएकालाई कोरोना लाग्दैन ? निषेधाज्ञामा पनि यस्तो भिड (तस्वीरहरु हेर्नुहोस्) « Lokpath
बैंकमा उभिएकालाई कोरोना लाग्दैन ? निषेधाज्ञामा पनि यस्तो भिड (तस्वीरहरु हेर्नुहोस्)
प्रकाशित मिति : 8 September, 2020 3:03 pm
काठमाडौं । कोरोना जोखिम न्यूनिकरणका लागि जारी निषेधाज्ञाको समयमा विभिन्न ठाँउमा मानिसहरुको भिड लाग्ने क्रम रोकिएको छैन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, तरकारी बजार तथा अन्य सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम गरी सेवा लिने दिने भनिएपनि बग्रेल्ती रुपमा मानिसहरुको भिडभाड बाक्लिन थालेको छ ।
हामी एनएमबी बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको कान्तिपथ शाखामा पुग्दा मानिसहरुको बाक्लो भिड लागेको थियो । त्यहाँ उपस्थित केही मानिसहरुले भने मास्क समेत प्रयोग गरेका थिएनन् । भने बैंक बाहिर लागेको भिडलाई मिलाउनको लागि त्यहाँका सुरक्षागार्डलाई समेत हम्मेहम्मे परिरहेको थियो ।
यी त भए केही प्रतिधिनि उदाहरण मात्र । पछिल्लो समय अन्य बैंकका पनि प्राय जसो शाखा कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको बाक्लो भिड लाग्ने गरेको पाइएको छ । त्यसमा एक त त्यहाँ आउने सेवाग्राहीहरुको गल्ति देखिन्छ भने अर्को त बैंकहरुको समेत कमजोरी देखिन्छ ।
केहि तस्वीरहरु :
फोटोमा हेर्नुहोस् – साताका ९ उत्कृष्ट तस्वीर
काठमाडौं । यो साता विश्वभरबाट खिचिएका केही उत्कृष्ट तस्वीरहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ
कमेडी वाईल्डलाईफ फोटोग्राफी अवार्डमा छानिएका यी १० तस्वीर
काठमाडौं । कमेडी वाईल्डलाईफ फोटोग्राफी अवार्ड २०२० का लागि छानिएका तस्वीर हरु जसले
यसरी गरियो कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट बिदाई (फोटोमा हेर्नुहोस्)
काठमाडौं । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक
‘युथ अफ तुलसीपुरका’ प्रदर्शन : ‘हेल्लो सरकार सम्धी खै ?’
दाङ । दाङमा बुधवार ‘युथ अफ तुलसीपुरका’ युवाहरुले सरकारको पछिल्लो समयको गतिविधीका विरोधमा